Shiinaha cadaadis sare oo buufin buufinta kaadi heysta balaastik ah warshad iyo alaableyda | Haohang
Qalabka biibiile caag ah ayaa sidoo kale loo yaqaan buufin tijaabo ah oo lagu buufin karo suuqa. Waxaa badanaa laga sameeyaa qalabka caagga ah. Cadaadiska Cadaadiska Buufin ee Bixinta Biyo Xidhka ayaa loo isticmaali karaa mashaariic badan oo loogu talagalay govenment.
Qalabka tuubbada caagga ah sidoo kale waxaa loogu yeeraa buufin tijaabada cinjirka lagu buufin karo suuqa. Waxaa badanaa laga sameeyaa qalabka caagga ah. Ku Cadaadis sarreeya Buufin caag Buufin la dabooli karo waxaa loo isticmaali karaa mashaariic badan oo govenment ah.
Tuubbooyinkeena caaga ah waxaa ka mid ah nooca cabbirka badan iyo nooca hal cabir ah, waxaa badanaa loo isticmaalaa baaritaanka ama hagaajinta dhuumaha dhamaan noocyada warshadaha, markaa macmiilku wuxuu sameyn karaa doorasho sida shuruudooda ah. Waxaan haynaa wax badan oo ku saabsanwaxyaabaha suunka caag, ku soo dhawow inaad nala soo xiriirto si wadatashi ah
Hore: Foomka Buufin lagu buufiyo Boobaska Tubbada Rubber ee Culvert
Xiga: Soosaar barkinta hawada ee tuubada cadaadiska sare leh
Fender Rubber, Boorsada Hawada ee Markabka, Barkinta Hawada Badda, Shiinaha Rubber Fender, Block isku dhafan, Maraakiibta Tec,